Ra’isul Wasaare Ku xigeenka dalka oo ka qeyb galay kulan ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arimaha Diinta | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’isul Wasaare Ku xigeenka dalka oo ka qeyb galay kulan ay soo...
Ra’isul Wasaare Ku xigeenka dalka oo ka qeyb galay kulan ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arimaha Diinta
Kulanka ayaa looga hadlayey sidii loo sameyn lahaaa gole guud oo ay leeyihiin culimada Soomaaliyeed iyo sida ugu haboon ee looga jawaab celinayo fikradaha qaldan ee laga bixinayo diinta islaamka.
Kulankan ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka cusub ee wasaaradda awqaafta iyo arimaha diinta ee xukuumada Soomaaliya iyo culimada Soomaaliyeed waxaa sidoo kale kulankan goob joog ka ahaa Raisalwasaare ku xigeenka dalka Mudane mahdi Maxamed Guleed.
Culimadii ka qeyb gashay kulanka ayaa si Wadajir ah waxa ay u sheegeen inay diyaar u yihiin la shaqeynta dowladda Federaalka Soomaaliya si looga hortago fakradaha cusub iyo kuwii hore looga bartay koxaha Nabad diidka ah ee lagu marin habaabinayo tubta toosan e Shareecada islaamka.
Wasiirka Cusub ee Awqaafta iyo arimaha diinta Iimaan C/llahu Cali ayaa kulanka ka sheegay inay wasaaradu u taagan tahay ka hortaga fakradaha qaldan ee laga bixinayo Diinteena suuban loona baahan yahay inay culimada kala shaqeeyeen.
Raisalwasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo kulanka Soo xeray ayaa sheegay in dowladda Soomaliyeed albaabkeedu uu furan yahay marwalba culimadda si si Wadajir ah loogu wajaho afkaarta qaldan ee ay kooxaha nabad diibku iyo kuwa la mid ah adeegsanayaan si ay u marin habaabiyaan dadka Soomaaliyeed.
kulanka waxa kale oo looga hadlay sidii looga soo saari lahaa Bayaan culimada iyo Wasaaradda awqaafta iyo arimaha diinta ee xukuumada Soomaaliya ay u dhan yihiin kooxda cusub ee la magac baxday Asaadicuun bil xaq oo macnaheedu yahay kuwa aan xaqa la gaban kuwaasoo dhawaan looga dhawaaqay waddama ay Soomaaliya ku jirto.
Previous articleAgaasimayaasha waaxyaha wasaaradda warfaafinta oo maanta xilalkooda la kala wareegay
Next articleXafladan lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho